Norway Labo Qof oo u dhintay Talaalka Corona ee lagu talaalay Dowlada oo war kasoo saartay dhacdadan Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway Labo Qof oo u dhintay Talaalka Corona ee lagu talaalay Dowlada oo war kasoo saartay dhacdadan
January 6, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Warka ugu akhriska badan 0
Sida uu Qoray Joornalka VG ku dhawaad labo qof ayaa u dhintay talaalka Corona ee dhawaan lagu talaalay waxaana arintaasi durba ka bilowday Baaritaan.
Wakaaladda dawooyinka ee Norway iyo Machadka Qaranka ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa si taxaddar leh u baaraya laba dhimasho oo la soo sheegay si loo qiimeeyo inuu xiriir la leeyahay tallaalka, waxay ku sheegeen warsaxaafadeed ay soo saareen .
– Hadda kuwa ugu jilicsan uguna nugul, ee qaba cudurro halis ah, waa la tallaaley. Markaa waxaa suuragal ah inay dhintaan dhimasho ku dhow waqtiga tallaalka. Waa inaan markaa qiimeyno inay tahay tallaalka sababta dhimashada, ama inay tahay wax kadis ah inay dhacdo isla marka la tallaalo ka dib, ayuu war-saxaafadeed ku qoray agaasimaha caafimaadka Steinar Madsen.
– Guryaha daryeelka ee Norwey, qiyaastii 400 oo qof ayaa u dhinta usbuucii. Wakaaladda dawooyinka ee Norway iyo Machadka Qaranka ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa si dhow ula socda in lambarkani is beddelo ka dib markii dadka deggan guryaha kalkaalinta la siiyo tallaalka.
Hay’adda daawooyinka ee Norwey ayaa horey uga digtay kiisas la Xiriira Talaalka iyo Dadkaasi markaasi liita ama ku jira Xaalada Adag.